လမ်းညွန်ချက်များ - How to use the abortion pill
လမ်းညွန်ချက်များ သင့်အတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါသည်။ အောက်ရှိသင့်တော်သောအကွက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Option 1: ရွေးချယ်စရာ ၁ - မီဖီကရီစတုန်း (Mifepristone) နှင့် မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol)
အဆင့် ၁ – မီဖီကရီစတုန်း (Mifepristone) (၂၀၀ မီလီဂရမ်)ဆေးတစ်လုံးကိုမျိုချပါ။ မီဖီကရီစတုန်း (Mifepristone)ကိုသင်သောက်ပြီးနောက်သွေးနည်းနည်းဆင်းတာကို သင်မြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤပုံမှန်ဖြစ်သည်။သို့သော် သင်ကသွေးဆင်းသည်ဖြစ်စေ မဆင်းသည်ဖြစ်စေ အဆင့်များအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၂ – ၂၄ နာရီမှ – ၄၈ နာရီအထိ စောင့်ပါ
မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol)ကိုသင်မသောက်မီ ၂၄ နာရီစောင့်သင့်သည်။သို့သော် ၄၈ နာရီထက်မပိုရပါ။ သင်စောင့်ဆိုင်းစဉ်အတွင်း၊ သင့်မိသားစုကိုတာဝန်ယူခြင်းသို့မဟုတ် အလုပ်သို့သွားခြင်းသို့မဟုတ် ကျောင်းတက်ခြင်း ကဲ့သို့သောနေ့စဉ်ဓူဝပုံမှန်လုပ်ဆောင်သည့် အတိုင်းလုပ်ကိုင်ပါ။ အဆင့် ၃ – မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol) (၂၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်စီပါသည့်ဆေး၎ လုံး) ကိုသုံးပါ။ မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol)ကိုသုံးရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်- ဆေးလုံးများကို သင့်မအင်္ဂါထဲသို့ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ် သင့်ပါးစောင်းနှင့် အောက်မေးရိုးသို့မဟုတ် သွားဖုံး များကြားတွင် ထည့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ နှစ်လမ်းနှစ်မျိုးစလုံးကအလွန်ထိရောက်ပါသည် –
မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol)ကိုသင်မအင်္ဂါထဲတွင်ထည့်လျှင် –
2.	လှဲလှောင်းနေပါ။သင့်လက်ချောင်းကိုသုံးလျက်ဆေးလုံး ၄ လုံးစလုံးကို သင့်မအင်္ဂါထဲသို့ထိုးထည့်ပါ။ဆေးကမအင်္ဂါထဲရှိအထူးနေရာတစ်ခုခုမှာရှိနေစရာမလိုပါ။ သင့်လက်ချောင်းအလွယ်တကူရောက်နိုင်သမျှရောက်သည့်အထိသာထည့်ပါ။
3.	မိနစ် ၃၀ လောက်လှဲလျောင်းနေပါ။
မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol)ကိုသင်ပါးစပ်ထဲတွင်ထည့်လျှင် –
1.	သင့်ခံတွင်းကိုစိုစွတ်စေရန်ရေတစ်ငုံလောက်မျိုချပါ။သင့်ပါးစောင်းနှင့်အောက်ပိုင်း သွားများသို့မဟုတ်သွားဖုံးများကြားတွင်ဆေး ၄ လုံးကိုထားပါ (တစ်ဘက်စီလျှင်ဆေး ၂လုံးစီ)။
2.	သင့်ပါးစောင်းတွင်ဆေးလုံးများကို မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာအောင်ငုံထားပါ။၎င်းတို့က ခံတွင်းထဲတွင်ပျော်ဝင်သွားသည့်အခါ သင့်ပါးစပ်ကိုခြောက်စေနိုင်သလိုမြေဖြူချောင်း စားနေရသလိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို မိနစ်၃၀ အတွင်းအစားအသောက်မစားရန် မသောက်ရန်။
3.	မိနစ်၃၀ ကြာပြီးနောက်ရေဖြင့်သင့်ခံတွင်းကိုအသန့်ဆေးလိုက်ပြီးဆေးအကျန်များကို ရေနှင့်သောက်ချပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီအတွင်း၊သင့်အနေဖြင့် ဗိုက်အောင့်မှုကိုစတင်ခံစားရပြီး သွေးစဆင်းမည်။သင်ကြိုက်သလောက်စားနိုင်သောက်နိုင်သည်။သို့သော်သင်နေထိုင်ပို ကောင်းလာသည်အထိသက်တောင့်သက်သာရှိ၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအနားယူနိုင်သည့် နေရာတွင်နေရန်စီမံထားသင့်သည်။ အမျိုးသမီးအများစုက ၂၄ နာရီအတွင်းမှာနေထိုင် ပြန်လာကြပါသည်။ကိုက်ခဲမှုသက်သာစေရန်အိုင်ဗျူပရိုဖန်ကိုသင်သောက်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်အချက်အလက်များရယူရန် “ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ” စာမျက်နှာတွင်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၄ –
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျဆေး မီဖီကရီစတုန်း (Mifepristone) နှင့် မီဆိုပရိုစတိုလ်(Misoprostol) ဆေးလုံးများကိုသင်သုံးလျှင်၊နောက်ဆက်တွဲပြသမှုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ ထံသွားပြစရာလိုချင်မှလိုလိမ့်မည်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်လက္ခဏာများသင်မခံစားရသည်ကို သေချာစစ်ကာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍သွေးအမြောက်အများမဆင်းသည်ကိုသေချာဂရု စိုက်ပါ။အောက်ပါတို့ဖြစ်လာလျှင်သာနောက်ဆက်တွဲကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သည်ဟုကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးမှအကြံပြုရလောက်ကို၎င်းဆေးဝါးများကအစွမ်းထက်ပါသည်- •	နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တွင် သင်နေထိုင်မကောင်းသည်သို့မဟုတ်ကိုက်ခဲမှု သက်သာခြင်းမရှိလျှင်။ဤသို့ဖြစ်လျှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုကိုချက်ချင်း ရယူပါ။
•	ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျဆေးလုံးများကိုသောက်၍နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်ရှိသည့် လက္ခဏာများကို သင်ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။
သတိပြုရန် – သင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲရှိ စွဲကျန်နေသည့် ဟော်မုန်းများကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသည်။ဆေးလုံးသုံးပြီးနောက်ကိုယ်ဝန် ရှိသည့်လက္ခဏာများကို သင်ဆက်လက်ဆံစားနေလျှင်(ရင်သားနူးညံ့မှု၊အော့အန်လိုခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊စသည်ဖြင့်)၊ ဆရာဝန်နှင့်သွားပြပါ။
•	ရွေးချယ်စရာ ၂ -မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol) တစ်မျိုးတည်း
သင်က ဆေးလုံးတစ်လုံးစီတွင်၂၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်ပါသည့် မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol) ၁၂ လုံးကိုသင်သုံးသည်ဟု ဤညွန်ကြားချက်များကယူဆထားသည်။ မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol) ကိုသုံးရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်- ဆေးလုံးများကိုသင့်မအင်္ဂါထဲသို့ ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ပါးစောင်းနှင့် အောက်မေးရိုးသို့မဟုတ်သွားဖုံးများကြားတွင် ထည့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။နှစ်လမ်းနှစ်မျိုးစလုံးကအလွန်ထိရောက်ပါသည်။
အဆင့် ၁ (က) – ပထမဆေးလုံး ၄ လုံးကိုသုံးပါ။
အဆိုပါဆေးလုံးများကို သင့်မအင်္ဂါထဲသို့ထည့်သွင်းရန် သင်ရွေးချယ်ပါက၊ဦးဆုံးဆီးသွားပြီး သင်လက်များကိုဆေးပြာနှင့်ရေဖြင့်ဆေးဖြစ်သည်ကိုသေချာလုပ်ဆောင်ပါ။လှဲလျောင်လိုက်ပြီး သင့်မအင်္ဂါထဲသို့ ဆေးလုံး ၄ လုံးထိုးထည့်ရန်လက်ချောင်းကိုသုံးပါ။ဆေးကမအင်္ဂါထဲရှိအထူး နေရာတစ်ခုခုမှာရှိနေစရာမလိုပါ။ သင့်လက်ချောင်းအလွယ်တကူရောက်နိုင်သမျှရောက်သည် အထိသာထည့်ပါ။နောက်ထပ် မိနစ်၃၀ တိုင်တိုင်လှဲနေပါ။
ဆေးလုံးကိုသင့်ပါးစပ်ထဲတွင်ငုံထားရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊သင့်ပါးစောင်းနှင့်အောက်မေးရိုး သို့မဟုတ် သွားဖုံးများကြားတွင်ဆေးလုံးများကိုထည့်၍ (တစ်ဘက်လျှင် ၂ လုံးစီ) မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာအောင် ငုံထားပါ။ဆေးလုံးကခံတွင်းထဲတွင်ပျော်ဝင်သွားသည့်အခါသင့်ပါးစပ် ကိုခြောက်စေနိုင်သလိုမြေဖြူချောင်းစားနေရသလိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ထို မိနစ် ၃၀ အတွင်း အစားအသောက်မစားရန်မသောက်ရန်။ အချိန်ပြည့်သွားလျှင်သင့်ခံတွင်းကိုဆေးပြီးဆေးကြွင်း ဆေးကျန်များကို ရေတချိုက်ဖြင့်သောက်ချပါ။
၁ (ခ) – အဆင့် ၂ ကိုမလုပ်ဆောင်မီ ၃- ၄နာရီလောက်စောင့်ပါ။
အဆင့် ၂ (က)- ဆေးလုံး ၄လုံးသုံးလျက် အဆင့် ၁ကိုပြန်ထပ်လုပ်ပါ။ဆေးလုံးများကို သင့်မအင်္ဂါထဲသို့ထည့်သွင်းရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊မိနစ် ၃၀ လောက်လှဲလျောင်းနေပါသို့မဟုတ် ဆေးလုံးကိုသင့်ပါးစပ်ထဲတွင်ငုံထားရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊သင့်ပါးစောင်းနှင့် အောက်မေးရိုး သို့မဟုတ် သွားဖုံးများကြားတွင်ဆေးလုံးများကိုထည့်၍ ရေနှင့်မျောမချမီ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာအောင် ငုံထားပါ။ ၂ (ခ) – အဆင့် ၃ ကိုမလုပ်ဆောင်မီ ၃- ၄ နာရီလောက်စောင့်ပါ။
အဆင့် ၃ – နောက်ဆုံးအသုတ်ဆေး ၄ လုံးကိုသုံးပါ။အဆင့် ၁ ကိုပြန်ထပ်လုပ်ပါ။ ဆေးလုံးများ ကိုသင့်မအင်္ဂါထဲသို့ထည့်သွင်းရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊မိနစ် ၃၀ လောက် လှဲလျောင်းနေပါ။ ဆေးလုံးကိုသင့်ပါးစပ်ထဲတွင်ငုံထားရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၊သင့်ပါးစောင်းနှင့်အောက်မေးရိုး သို့မဟုတ် သွားဖုံးများကြားတွင်ဆေးလုံးများကိုထည့်၍ရေနှင့်မျောမချမီ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာအောင်ငုံထားပါ။ နောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်မည်လဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီအတွင်းတွင်ပထမအသုတ်ဆေးလုံးများကိုသင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှ စုပ်ယူပြီးနောက်သင်ကဗိုက်နာမှုနှင့်သွေးဆင်းမှုတို့ကိုစတင်ခံစားရမည်။ ပုံမှန်ရာသီလာချိန် ထက်ပို၍ ဤဗိုက်အောင့်မှုများက ပိုဆိုးနိုင်သည်။သင်ကြိုက်သလောက်စားနိုင်သောက်နိုင် သည်။ သို့သော်သင်နေထိုင်ပိုကောင်းလာသည်အထိသက်တောင့်သက်သာရှိ၍ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျအနားယူနိုင်သည့်နေရာတွင်နေရန်စီမံထားသင့်သည်။အမျိုးသမီးအများစုက ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ နေထိုင်ပြန်လာကြပါသည်။ကိုက်ခဲမှုသက်သာစေရန်အိုင်ဗျူပရိုဖန်ကိုဖြစ်စေ ဆေးဆိုင်မှဝယ်ယူသည့်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုဖြစ်စေသင်သောက်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်အချက်အလက်များရယူရန် “ href=”http://howtouseabortionpill.org/side-effects/” target=”_blank”>ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ” စာမျက်နှာတွင်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၄- သင့်ဆရာဝန်ထံသို့သွားပြပါ။
သင်က မီဆိုပရိုစတိုလ် (Misoprostol)တစ်မျိုးတည်းကိုသာသုံးလျှင် ဆေးသုံးပြီးနောက်ပိုင်း ၂- ၃ ပတ် အကြာလောက်တွင် သားဖွားဆရာမ၊သူနာပြုသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကသင့်ကို စစ်ဆေးနိုင်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။မွေးလမ်းကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်သင်ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေဆဲရှိမရှိကိုသူတို့ကပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။သင်ကမွေးလမ်းကြောင်းမစစ်ဆေးလိုပါက အလ်ထရာဆောင်း(ရနိုင်လျှင်)ကိုသင်တောင်းခံနိုင်ပါသည်။သင်ပြောပြနိုင်ပါကကိုယ်ဝန်ဖျက် ကျဆေးကိုသင်သုံးထားကြောင်းအား သင့်ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးသူထံသို့တင်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။ ဤအကြောင်းကိုဝေမျှရန်ဘေးကင်းမှုမရှိဟုသင်ခံစားရသည်ဖြစ်စေ သင်နေ ထိုင်သည့်အရပ်တွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျမှုကိုတားမြစ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထား၍ သွေးဆင်းသည်ဟုထင်မိခဲ့ကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်သလို ပုံမှန်ရာသီလာသည်ထက်ထူးခြားပုံပေါ်သည့် သွေးဆင်းခဲ့ကြောင်းကိုလည်းပြောပြနိုင်သည်။
သင်ကအောက်ပါတို့ကိုခံစားနေရလျှင် သင့်ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးသူထံ သင်သွားပြရမည် –
နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တွင် နေထိုင်မကောင်းသည်သို့မဟုတ် သင့်ကိုက်ခဲမှု သက်သာခြင်းမရှိလျှင်။ဤသို့ဖြစ်လျှင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုကို ချက်ချင်းရယူပါ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျဆေးလုံးများကိုသောက်၍ ၂ ပတ်ကြာပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ရှိသည့်လက္ခဏာများကို သင်ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။
သတိပြုရန် – သင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲရှိ စွဲကျန်နေသည့် ဟော်မုန်းများကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသည်။ကိုယ်ဝန်ရှိသည့်လက္ခဏာများကို သင်ဆက်လက်ဆံစားနေလျှင် (ရင်သားနူးညံ့မှု၊အော့အန်လိုခြင်း၊မောပန်းခြင်း၊စသည်ဖြင့်) ဆရာဝန်နှင့်သွားပြပါ။